Sh Dirir Oo Booqdey Dhismaha Masjidka Nasrudiin + [ Sawiro / Muuqaal ] – Ilays News
Sh Dirir Oo Booqdey Dhismaha Masjidka Nasrudiin + [ Sawiro / Muuqaal ]
Hargeysa (Ilays-News):- Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir oo kamid ah Culimadda Somalida kuwo ugu magaca iyo muuqa dheer ayaa booqday dhismaha Masjidka Nas-rudiin ee ka socda Xaafadda Daami ee Magaaladda Hargeysa.
Sheekha Oo kamid ahaa culimada baaqa u dirtay umadda Somaliyeed si ay ugu qeyb qaatan dhismaha masjidkan marki kowaad ee qaadhaankiisa la waday ayaa aad ugu farxay hab-sami u socodka hawsha dhismaha Masjidka.
Waxaana uu Sheekhu si weyn ugu mahadceliyey dhammaan dadki ka soo qeyb qaatay qaadhanka masjidka sidoo kalena wuxu sheekhu aad ugu mahadceliyey guddida gacanta ku haysta dhismaha masjidka , Wuxuunu baaq u diray umadda muslinka ah gaar ahaan umadda somaliyeed in ay soo dhamys tiraan dhismaha masjidka .
Waxa dhanka kale goobta ka hadlay Imaamka Masaajidka Sh. Maxamed Axmed oo si ballaadhan ugu mahadceliyey Sheekh Maxamed Sheekh dirir iyo kaalintiisa kaalmeynta dadka waxa kale oo u Sh. Maxamed Axmed sheegay in ay mihiim tahay in inta hadhayna xoog umadda uga qeyb qaadato.